Ndị ọbịa ezighi ezi maka SEO?
Wenezde, August 27, 2014 Thursday, August 28, 2014 Douglas Karr
Ka ị na-achọ ịzụlite ọdịnaya maka saịtị gị, ọ na-esiri gị ike ịnọgide na-enwe agụụ maka ọdịnaya dị ukwuu. Enwere ike ịnwa gị ịnabata ndị na-ede blọgụ ọbịa site n'oge ruo n'oge maka blog gị.
Kwa ụbọchị, anyị na-enweta onyinye iji kwụọ ụgwọ maka akwụkwọ nkwado yana arịrịọ maka akwụkwọ ndị ọbịa. Anyị nwalere ụgwọ ọrụ ọtụtụ ọnwa gara aga wee kwụsị ozugbo - Ọ ga-eju m anya ma ọ bụrụ na anyị nwere ekpe ọ bụla. Àgwà ahụ dị egwu mgbe niile, ọdịnaya anaghị elebara ndị na-ege anyị ntị anya, yana ebumnuche ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile ịre ma ghara inye ndị na-agụ akwụkwọ anyị uru. A ka na-anabata post ndị ọbịa mana m ga-eme atụmatụ na ọ bụ naanị otu pacenti ma ọ bụ abụọ ka ebipụtara.
Ná mmalite nke afọ a, Matt Cutts nke Google nyere ịdọ aka ná ntị na-esonụ:
Ọ dị mma, ana m akpọ ya: ọ bụrụ na ị na-eji blọgụ ndị ọbịa dịka ụzọ iji nweta njikọ na 2014, ị ga-akwụsịrịrị. N'ihi gịnị? Maka na oge na-aga, ọ na-abawanye omume spammy, ma ọ bụrụ na ị na-eme ọtụtụ blọgụ ndị ọbịa mgbe ahụ gị na ụlọ ọrụ ọjọọ dị na-akpakọrịta. Laa azụ n'ụbọchị ahụ, ịde blọgụ ndị ọbịa na-abụbu ihe a na-akwanyere ùgwù, dị ka ịnweta onye ị na-achọsi ike, onye a na-akwanyere ùgwù iji dee mmeghe nke akwụkwọ gị. Ọ bụghị otú ahụ ọzọ.
Ya mere,… ịde blọgụ ndị ọbịa abụghị naanị na-emebi ogo ọdịnaya gị, ọ nwere ike ịbụ na ọ na-emetụta ogo saịtị gị na injin ọchụchọ!
N'abalị a, enwetara m Akwụkwọ Okwu nke nwere ederede pụrụ iche edere maka ịtụle maka blọgụ anyị. O juru m anya n'ihi na anaghị m anata post ahụ ruo mgbe mụ na ndị ọrụ mmekọrịta ọha na eze ma ọ bụ ụlọ ọrụ anyị na-ede banyere ụfọdụ mkparịta ụka. M na-agụ post na ọ bụ n'ezie ezi mma - na-enye ihe atụ nke pụrụ iche email mkpọsa. Dị ka nlele, M depụtaghachi paragraf mbido ma tinye ya na Google iji hụ ma enwere ọdịnaya nke ezigarala ebe ọzọ.
Nke a rụpụtara ihe na-atụtụ ụjọ. Isiokwu ahụ pụrụ iche, mana ọ bụ otu klọọkụ nke isiokwu edere na afọ ole na ole gara aga nke dọtara ọtụtụ uche. M nwere ụfọdụ yiri nkebi ahịrịokwu na emelitere n'omume. Ọ bụghị otu ụdị ahụ ma nwee ike ịgafela ngwa ọrụ dịka Copyscape… mana ọ bụghị ihe pụrụ iche. Onye ọ bụla onye edemede ahụ bụ, ọ rụrụ ezigbo ọrụ na mmelite ihe atụ na idegharị ederede iji zere ịchọta ya.
N'ezie, anyị agaghị ebipụta isiokwu ahụ. Ewezuga infographics, post ọ bụla anyị kesara pụrụ iche na Martech Zone. Ọbụna a na-ebipụta infographics site na iji iwebata pụrụ iche yana ọnụọgụ 2 na ha. Ndi bekee… anwala ịnakwere akwụkwọ ozi ndị ọbịa. O yikarịrị ka ha bụ atụmatụ iji nweta njikọ ụfọdụ na saịtị gị. Nke a na-etinye ọrụ niile siri ike ị rụzuru nwere nnukwu ihe egwu. Ekwela ka a nwaa gị!
Ọ ga-akara m mma ịhapụ ụbọchị izipu karịa itinye saịtị yana itinye afọ iri n'ime ya n'ihe ize ndụ!
Tags: google +ogige ndị ọbịaakpụkpọ anụ mattsearch engine njikarịchaAnkwado posts
Ihe kpatara Digital Asset Management bụ akụkụ dị oke mkpa na usoro teknụzụ Azụmaahịa
Aug 28, 2014 na 2: 38 AM
Echiche gha bụ ihe ị na-ekwu m na-atụ anya ya. Ọ bụghị na ụlọ ọrụ ndị ọbịa nwụrụ anwụ kama nke a adịghị mkpa na njikọ ọjọọ jikọtara anwụ bụ nke m kwenyere !!
Aug 28, 2014 na 11: 09 AM
Akwa post Douglas! Ekwenyere m na ihe niile i kwuru, m ga-ekwukwa na ọ dị mma, ị ka na-ekwe ka ndị ọbịa nọrọ (ọ bụ ezie na ndị ukwu). Achọtara m ọtụtụ saịtị nke kpebiri ịghara ịnabata nzipu ozi ndị ọbịa nke dị mma, mana enwere ike ha ga-atụ uche nnukwu ohere.